बडीमालिकाको बखान : जहाँ मन नै हराभरा हुन्छ (फोटो फिचर) - नागरिक रैबार
बडीमालिकाको बखान : जहाँ मन नै हराभरा हुन्छ (फोटो फिचर)
२४ माघ, काठमाडौं । आँखाले भ्याउनेसम्मको फराकिलो लेकाली फाँट । सतहमा रंग-विरंगी जंगली फूलहरु । मध्यभागमा कलकल बग्ने खोला । खोला किनारमा मन्दिर । कुनै सिपालु चित्रकारले कुशलतापूर्वक खिपेको ल्याडस्केप जस्तो । आहा ! कति मोहक बडीमालिका । प्रकृतिको यो कस्तो मनोहर उपहार ?
जब-जब खप्तड र बडीमालिकाकको प्रसंग आउँछ, मेरो हृदय यसै-यसै रोमाञ्चित हुन पुग्छ । यहाँको बिराट सौन्दर्यलाई आफैंभित्र समेटेर बसौं जस्तो लाग्छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य कृष्णबहादुर महराले खप्तड-बडीमालिकाको कुरा गरिरहन्थे । उनको भनाइ के हुन्थ्यो भने, जीवनमा एक पटक त्यहाँ पुग्नैपर्छ । तर, उनले भनेजस्तै खप्तड-बडीमालिका पुग्ने मेलोमेसो मिलिरहेको थिएन ।
यसपटक राम्रो गुण लगाए, दीपक खड्काले । उनी पर्यटन व्यवसायी हुन् । खप्तड र बडीमालिकाको पर्यटन विकासमा टेवा पुर्‍याउने हेतुले उनले हेलिकप्टर टुर प्याकेज ल्याएका रहेछन् । यही मौकामा मनमा थाँती रहेका रहर पूरा गरियो । अर्थात खप्तड र बडीमालिका पुग्ने मेसो जुर्‍यो ।
प्राकृतिक सौन्दर्यमा त्यस्तो के जादु हुन्छ, जसले मनलाई हरदम आनन्दि बनाउँछ ? जसै खप्तड र बडीमालिका पुगियो, मन नै हराभरा भयो ।
प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउने र धार्मिक आस्था राख्नेहरुका लागि गजब गन्तव्य रहेछ, बडीमालिका । अपी सैपाल हिमाललगायतलाई पृष्टभूमिमा राखेर बडीमालिकाले आगन्तुकको स्वागत गर्छ । यहाँको विशाल फाँटहरुमा पुग्दा मन यसै-यसै उमंगले भरिन्छ ।
यी फाँटहरुले समयअनुसार आफ्नो रुप परिवर्तन गर्छ । हिँउदमा यो सेताम्मे हुन्छ, हिँउले ढाकेर । वषर्ायाममा यो रंगीचंगी हुन्छ । हरिया फाँटहरुमा फूल्ने लेकाली फूलहरुले यो विछट्टै रुपवती देखिन्छन् ।
बडीमालिकामा प्रत्येक वर्ष जनै पूणिर्माका दिन ठूलो मेला लाग्छ । गंगा दशहरा र जनैपूणिर्मा गरी वर्षको दुईपटक मेला लाग्दै आएको छ ।
त्यस समयमा केही स्थानीय व्यापारीहरुले पसल राख्ने गर्छन् । अन्य समयमा त्यहाँ पसलहरु खासै भेटिँदैन । मुलुकका विभिन्न जिल्लाका साथै भारतबाट पनि तीर्थालुहरू यहाँ मेला भर्न आउँछन्ा् । भक्तजनहरूले आफूले मागेको वरदान पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् ।
खानपान र वसोबासको व्यवस्था
बडीमालिका पुग्नका लागि उचित बास बस्ने स्थान नभएका कारण भक्तजन तथा पर्यटकले खानपिन तथा बासको जोहो आफैं गर्नुपर्छ । मन्दिर व्यवस्थापनले भक्तजनहरुलाई बास बस्नका लागि एउटा धर्मशाला बनाइदिएकाले भक्तजनहरु त्यहीँ बास बस्ने गर्छन् ।
जडीबुटी चोरिने जोखिम
बडीमालिकामा सरकारको पहुँच नभएका कारण त्यहाँबाट जडीबुटीको चोरी निकासी हुने गरेको छ । सरकारले बडिमालिका जाने स्थानमा चेकपोष्ट राख्नुपर्ने उनको माग छ ।
यो मन्दिरमा सरकारका तर्फबाट एकजना पूजारी बनाइएका छन्ा् । त्यसो त यो पश्चिमनेपालको शक्तिशाली शक्तिपीठ हो ।
गाडीबाट बडीमालिका जान धनगढी वा नेपालगन्जबाट अछामको साँफेबगर पुग्नुपर्छ । त्यहाँबाट ब्रहृमतोलाको शेराबजारसम्म गाडीको सुविधा छ । साँफेबगरबाटै हिँड्नुको विकल्प छैन । हवाईमार्गको प्रयोग गर्ने हो भने नेपालगन्जबाट बाजुरा विमानस्थल कोल्टी पुगिन्छ । कोल्टीबाट एक दिनको बाटो हिँडेर सदरमुकाम मार्तडी पुगिन्छ । बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडी बजारबाट पैदल हिंडेर जाँदा ३ दिनमा पुग्न सकिन्छ । अनलाइनखबरबाट साभार
(धनञ्जय रेग्मी नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
पत्रकार महासघं बाजुराको साधारण सभा माघ २८ गते गरिदै
बाजुरा कृषि ज्ञान केन्द्रद्धारा १ लाख २५ हजार फलफूलका बिरुवा रोपियो
बाजुरा: बाजुरामा यस वर्ष मात्रै १ लाख २५ हजार फलफुलका बिरुवा रोपिएका छन्।गत वर्ष झै यो वर्षपनि सरकारी अनुदान र किसानको लागतमा १ लाख २५ हजार बिरुवा रोप्ने काम भइरहको कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका सूचना अधिकारी मिनप्रसाद जैशीले बताए। बाजुरालाई अवसर र सम्भावनाको जिल्लाको रुपमा चिनाउन कृषि ज्ञान केन्द्रले २०७७ साललाई फलफूल रोपण वर्ष घोषणा […]
ताप्लेजुङमा फेरि ठूलो आगलागी
ताप्लेजुङ : मेरिङ्देन गाउँपालिका–३ स्थित दोभान बजारमा मंगलबार आगलागी हुँदा ४९ घर जलेका छन्। ५५ परिवार विस्थापित भएका छन्। भौतिक क्षति यकिन भइसकेको छैन। बजारको मुख्य भागको ६५ प्रतिशत घर जलेको गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशबहादुर लिम्बूले बताए। स्थानीय प्रेम न्यौपानेले सोमबार बिर्तामोड (झापा)बाट दुई ट्रक युरिया र डीएपी मल, एक गाडी खाद्यान्न ल्याएका थिए। बेलुकी अबेरसम्म […]